Ọrụ Ndịozi 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọrụ Ndịozi 10:1-48
Ọhụụ Kọnịliọs hụrụ (1-8)
Pita hụrụ anụ ndị e mere ka ha dị ọcha n’ọhụụ (9-16)
Mgbe Pita gara na nke Kọnịliọs (17-33)
Pita ziri ndị mba ọzọ ozi ọma (34-43)
“Chineke anaghị ele mmadụ anya n’ihu” (34, 35)
Mmụọ nsọ dakwasịrị ndị mba ọzọ, e meekwa ha baptizim (44-48)
10 E nwere otu nwoke na Sizaria aha ya bụ Kọnịliọs. Ọ bụ onyeisi otu ìgwè ná ndị agha a na-akpọ ndị agha Ịtali.* 2 Ọ na-efe Chineke. Ya na ndị ezinụlọ ya na-atụkwa egwu Chineke. Ọ na-enye ndị ogbenye onyinye, na-arịọkwa Chineke arịrịọ mgbe niile. 3 Otu ụbọchị, n’ihe dị ka n’awa nke itoolu,*+ ọ hụrụ otu mmụọ ozi Chineke nke ọma n’ọhụụ. Mmụọ ozi a bịakwutere ya ma kpọọ ya: “Kọnịliọs!” 4 Kọnịliọs wee jiri ụjọ legide ya anya ma jụọ ya, sị: “Onyenwe anyị, gịnị ka ị chọrọ ka m mee?” Mmụọ ozi ahụ asị ya: “Chineke anụla ekpere gị, hụkwa otú i si na-enyere ndị ogbenye aka.+ 5 N’ihi ya, ziga ndị ozi Jọpa ugbu a ka ha gaa kpọọ otu nwoke aha ya bụ Saịmọn, onye a na-akpọkwa Pita. 6 Ọ bụ ọbịa n’ụlọ otu nwoke aha ya bụ Saịmọn, onye na-esiji akpụkpọ anụ.* Ụlọ nwoke a dị n’akụkụ oké osimiri.” 7 Ozugbo mmụọ ozi a gwara ya okwu pụrụ, ọ kpọrọ mmadụ abụọ n’ime ndị odibo ya, kpọọkwa otu onye agha n’ime ndị na-ejere ya ozi, onye ife Chineke na-amasị, 8 wee kọọrọ ha ihe niile merenụ ma ziga ha Jọpa. 9 N’echi ya, ka ha nọ na-aga, na-erukwa obodo ahụ nso, Pita gbagooro n’elu ụlọ* n’ihe dị ka n’awa nke isii* ka ọ nọrọ ebe ahụ kpee ekpere. 10 Ma, ezigbo agụụ jidere ya. Ka a nọkwa na-esi nri, ọ hụrụ ọhụụ.+ 11 Ọ hụrụ ka eluigwe meghere, hụkwa ka e ji ihe dị ka nnukwu ibé ákwà linin aka n’isi anọ ya, na-ewedata ya n’ụwa. 12 Ụdị anụmanụ niile nọ na ya, ma anụ ndị nwere ụkwụ anọ ma anụ ndị na-arị arị* ma nnụnụ. 13 Ọ nụrụ otu olu gwara ya, sị: “Pita, bilie, gbuo otu n’ime anụ ndị a rie.” 14 Ma Pita sịrị: “Onyenwe anyị, mbanụ, n’ihi na eritụbeghị m ihe rụrụ arụ ma ọ bụ ihe na-adịghị ọcha.”+ 15 Ọ nụkwara olu ahụ nke ugbo abụọ ka ọ sịrị ya: “Kwụsị ịkpọ ihe Chineke mere ka ha dị ọcha ihe rụrụ arụ.” 16 Ihe a mere ugboro atọ. Ozugbo ahụkwa, e buuru ihe ahụ Pita hụrụ bugoo eluigwe. 17 Ma ọhụụ a gbara Pita gharịị. Ka ọ nọkwa na-eche gbasara ihe ọ pụtara, ndị ozi ahụ Kọnịliọs zipụrụ ajụtala ebe ụlọ Saịmọn dị, kwụrụkwa n’ọnụ ụzọ ámá ya.+ 18 Ha kpọrọ onye nwe ụlọ ahụ ma jụọ ya ma Saịmọn Pita ọ̀ nọ ebe ahụ. 19 Ka Pita nọ na-eche gbasara ọhụụ ahụ, Chineke ji mmụọ nsọ ya+ gwa ya, sị: “E nwere ụmụ nwoke atọ na-achọ gị. 20 Bilie, gbadaa n’ala ma soro ha gawa. Enwekwala obi abụọ ọ bụla, n’ihi na ọ bụ m zitere ha.” 21 Pita wee gbadata n’ala, gakwuru ụmụ nwoke ahụ, sị ha: “Lekwanụ m. Ọ bụ m ka unu na-achọ. Gịnị mere unu ji na-achọ m?” 22 Ha asị ya: “Kọnịliọs+ zitere anyị. Ọ bụ onyeisi ndị agha, onye ezi omume, nwoke na-atụ egwu Chineke nakwa onye ndị Juu niile na-akọ akụkọ ọma gbasara ya. Chineke gwara otu mmụọ ozi* ka ọ gwa Kọnịliọs ka o zie ozi ka a kpọọ gị ka ị bịa n’ụlọ ya, ka ọ nụ ihe ị ga-agwa ya.” 23 Pita wee kpọbata ha, ya na ha anọrọ chi abọọ. N’echi ya, o biliri soro ha gawa. Ụfọdụ n’ime ụmụnna ndị si Jọpa sokwa ya gaa. 24 Nwanne echi ya, ọ banyere Sizaria. Kọnịliọs nọ na-atụ anya ha, kpọkọọkwa ndị ikwu ya na ezigbo ndị enyi ya. 25 Mgbe Pita batara, Kọnịliọs gara zute ya, sekpuru ala n’ihu ya ma kpọọrọ ya isiala. 26 Ma Pita dọlitere ya, sị ya: “Bilie, abụ m mmadụ ibe gị.”+ 27 Ka ha abụọ nọ na-akparịta ụka, Pita banyere n’ime ụlọ ahụ ma hụ ọtụtụ ndị gbakọtaranụ. 28 O wee sị ha: “O doro unu anya na onye Juu dara iwu ndị Juu ma ọ bụrụ na ya na onye agbụrụ ọzọ na-akpakọrịta ma ọ bụkwanụ na ọ bịara onye ahụ nso.+ Ma, Chineke gosiri m na e nweghị onye m kwesịrị ịsị na ọ rụrụ arụ ma ọ bụ na ọ dịghị ọcha.+ 29 Ọ bụ ya mere m ji jiri obi m niile bịa mgbe i ziri ka a kpọọ m. Gwazie m ihe mere i ji zie ozi ka m bịa.” 30 Kọnịliọs wee sị: “N’ụdị oge a n’abalị anọ gara aga, anọ m na-ekpe ekpere n’ụlọ m n’awa nke itoolu,* otu nwoke yi uwe na-enwu gbaa bịara guzoro n’ihu m 31 wee sị m: ‘Kọnịliọs, Chineke anụla ekpere gị, hụkwa otú i si na-enyere ndị ogbenye aka. 32 N’ihi ya, ziga ndị ozi Jọpa ka ha gaa kpọọ otu nwoke aha ya bụ Saịmọn, onye a na-akpọkwa Pita. Ọ bụ ọbịa n’ụlọ otu nwoke aha ya bụ Saịmọn, onye na-esiji akpụkpọ anụ.* Ụlọ nwoke a dị n’akụkụ oké osimiri.’+ 33 M wee zie ozi ozugbo ka a kpọọ gị. I meela otú i si bịa. Ugbu a, anyị niile agbakọtala n’ihu Chineke ịnụ ihe niile Jehova* gwara gị ka i kwuo.” 34 Pita wee sị: “O doola m nnọọ anya na Chineke anaghị ele mmadụ anya n’ihu.+ 35 Kama ná mba ọ bụla, ọ na-anabata onye na-atụ egwu ya, nke na-emekwa ihe dị mma.+ 36 Chineke zigaara ụmụ Izrel ozi, ya bụ, ozi ọma gbasara otú ha ga-esi si n’aka Jizọs Kraịst mee ka ha na Chineke dịrị n’udo.+ Jizọs bụkwa Onyenwe ndị ọzọ niile.+ 37 Unu ma onye a nọ na-ekwu banyere ya malite na Galili+ ruo na Judia niile, mgbe Jọn kwusachara gbasara baptizim. 38 Onye ahụ a na-ekwu banyere ya bụ Jizọs onye Nazaret. Chineke ji mmụọ nsọ tee ya mmanụ+ ma nye ya ike. Ebe Chineke nọnyeere ya,+ ọ gazuru ala ahụ na-eme ihe ọma ma na-agwọ ndị niile Ekwensu na-emekpọ ọnụ.+ 39 Anyị jikwa anya anyị hụ ihe niile o mere ma na Jeruselem ma n’obodo ndị ọzọ bụ́ nke ndị Juu. Ma, ha kwụwara ya n’osisi, ya anwụọ. 40 Chineke kpọlitere ya n’ụbọchị nke atọ+ ma mee ka ndị mmadụ hụ ya. 41 O meghị ka mmadụ niile hụ ya, kama, ọ bụ naanị anyịnwa, ndị ya na ha rikọrọ, ṅụkọọ mgbe o bilitechara n’ọnwụ. Chineke họpụtara anyị tupu oge eruo ka anyị hụ ya ma kwuo gbasara ya.+ 42 Ọ gwakwara anyị ka anyị kwusaara ndị mmadụ ozi ọma ma gbaa àmà nke ọma+ na onye a bụ onye Chineke kpebiri na ọ ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe.+ 43 Ndị amụma niile na-agbakwa àmà banyere ya,+ na ọ bụ n’aha ya ka a ga-agbaghara onye ọ bụla nke kweere na ya mmehie.”+ 44 Ka Pita nọ na-ekwu ihe ndị a, mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile na-ege okwu Chineke ọ na-ekwu.+ 45 Ihe a juru ndị Juu na-eso ụzọ Jizọs* so Pita bịa anya, n’ihi na mmụọ nsọ, bụ́ onyinye Chineke na-enye, dakwasịkwara ndị mba ọzọ. 46 N’ihi na ha nụrụ ka ha na-ekwu okwu n’asụsụ dị iche iche, na-etokwa Chineke.+ Pita wee sị: 47 “Ebe ọ bụ na mmụọ nsọ adakwasịla ndị a otú ọ dakwasịrị anyị, ò nwere onye ga-asị na a gaghị eme ha baptizim?”+ 48 O wee sị ka e mee ha baptizim n’aha Jizọs Kraịst.+ E mechaa, ha arịọ ya ka ọ nọnyere ha ụbọchị ole na ole.
^ Ndị agha Rom nwoke a bụ onyeisi ha dị otu narị.
^ Ya bụ, onye na-emechasị akpụkpọ anụ ma sijie ya ka e jiri ya rụọ ihe dị iche iche.
^ Elu ụlọ ndị a na-arụ n’oge ahụ na-adịkarị larịị. Ndị mmadụ na-anọkwa na ha eme ihe dị iche iche.
^ Ya bụ, n’ihe dị ka n’elekere iri na abụọ nke ehihie.
^ Ma ọ bụ “anụ ndị na-akpụ akpụ.”
^ Ma ọ bụ “mmụọ ozi dị nsọ.”
^ Na Grik, “ndị na-eso ụzọ Jizọs e biri úgwù.”
Ọrụ Ndịozi 10